Fanalahidy iasan'ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/07/2021 23:04 | fifandraisana
Betsaka ny olona tsy vintana amin'ny fitiavana ary manontany tena matetika, inona ny tsiambaratelon'ireo mpivady miasa tsara ireo ary manana fifandraisana maharitra izy ireo. Tsy misy teôria marina momba izany ary izany dia ny hoe ny mpivady tsirairay dia izao tontolo izao, miaraka amin'ny fombany sy ny soatoaviny.
Ny fifandraisana rehetra dia tsy maintsy tohanana andiana soatoavina izay mahatonga azy io tsy hihamalemy sy hihamatanjaka. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiezaka izahay hilaza aminao hoe inona no tsiambaratelo mba hiasa tanteraka ny fifandraisana sasany maharitra an-taonany maro.
Inona no tsiambaratelo hiasan'ny mpivady
Misy lakile maromaro, izay mahatonga ny fifandraisana iray haharitra rehefa mandeha ny fotoana ary mandeha tsara izy io:
Ny fitokisana amin'ny mpiara-miasa dia zava-dehibe ary ilaina mba haharetany amin'ny fotoana maharitra. Raha tsy mifampatoky ianareo roa tonta dia ara-dalàna raha miharatsy ny fifandraisana mandra-pisara tanteraka.
Mba hahombiazan'ny mpivady sy hanjary ho matanjaka rehefa mandeha ny fotoana dia ilaina ny hahatsapan'ny olona roa fankasitrahana lehibe ny tsirairay. Ireo toetran'ilay olon-tiana dia tsy maintsy asongadina mba hahatsapan'izy ireo fa takatra sy tiana izy ireo.
Ny fahatsapana vazivazy sy ny fahitana ny fiainana amin'ny fomba fijery tsara dia manampy koa ny fifandraisana hihazona ny fotoana. Tsy misy zavatra mahafinaritra kokoa noho ny afaka mihomehy miaraka amin'ny olon-tianao.
Ny fiaraha-miory dia soatoavina lehibe amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny fifandraisana izay tsy tokony ho foana. Zava-dehibe ny fahalalana ny fomba fametrahana ny tenanao ao amin'ny kirarin'ny olon-tiana ary hahatsapa ny fihetsem-po sy ny fihetseham-po rehetra. Ny fiaraha-miory dia manampy amin'ny fanamafisana ny fifamatorana ary mamela ny mpivady hitombo matanjaka kokoa rehefa mandeha ny fotoana.
Ny fifandraisana dia tsy afaka maharitra ara-potoana raha tsy misy karazana fanajana na andaniny na ankilany. Raha misy ny fanajana, misy filaminana sy fahatokisana, zavatra tena ilaina mba tsy hisaraka ny mpivady.
Ny mpivady dia tsy maintsy eo foana, na amin'ny fotoam-pifaliana na amin'ny fotoan-tsarotra. Ny fanohanana dia fanalahidy mba hahafantaran'ilay olona manana olana fa tsy irery izy ireo ary afaka miantehitra amin'ny mpiara-miasa aminy na inona izany na inona.
Ankoatry ny firaisana, ny fanehoana fitiavana sy firaiketam-po dia mamela ny fifandraisana hipetraka sy hatanjaka kokoa. Raha tsy misy fitiavana sy tsy misy firaiketam-po, tsy misy karazana mpiara-miasa azo tazonina.
Raha fintinina dia maro ny lakilen'ny fiasan'ny mpivady ary tsy miharatsy ny taona. Ankoatry ny zavatra hita dia ilaina ihany koa ny fiasan'ny mpivady, ny fananan'ny olona roa manana toerana manokana ivelan'ny fiainana mpivady. Tsy zavatra tsara ny mandany fotoana be loatra amin'ny mpiara-miasa, satria raha mitranga izany dia mety hisy akanjo sy rovitra manan-danja eo aminy ary hampitsahatra ny fifandraisana. Aza adino koa fa mila mahay mamela heloka ianao ary manilika ny avonavona. Amin'izany dia afaka miroborobo ny mpivady rehefa mandeha ny fotoana ary lasa matanjaka kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Fanalahidy iasan'ny mpivady
Tombony 6 amin'ny fisotro rano voasarimakirana isan'andro